နယူး Marvel ပိုစတာများသည် zombie LEGO minifigure အတွက်ရွေးချယ်စရာများကိုဖော်ပြသည်
နယူး Marvel ပိုစတာများသည်မသေဆုံးသေးသော LEGO minifigure အတွက်ရွေးချယ်စရာများကိုဖော်ပြသည်
06 / 09 / 2021 06 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 238 Views စာ0မှတ်ချက် 71031, 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ကလင် Barton, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, Marvel ဖုတ်ကောင်, ပိုစတာ, စတိဗ်ရော်ဂျာ, ကဗျာ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey, ဖုတ်ကောင်
အပတ်စဉ်ပိုစတာများကိုဖြန့်ချိသည် Marvelဘာဖြစ်လဲ ... ? မရသေးသူများအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုပြသသည် Lego minifigure အတွင်း 71031 Marvel စတူဒီယို.
ပဉ္စမအပိုင်းမတိုင်မီ Marvelဘာဖြစ်လဲ ... ? စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ Marvel ဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းတွဲတွင်ပါ ၀ င်မည့်ဇာတ်ကောင်များအားပိုစတာပိုစတာအသစ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီ superheroes တွေကပုံမှန်ထက်နည်းနည်းပိုသေတယ်။
နောက်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ ... ? ယခုမျှော်မှန်းထားသောအခန်းကိုအခြေခံပြီးအတည်ပြုသည် Marvel Zombies သည် Zombie Captain America ကိုပြသမည့်ဘယ်ဘက်ပိုစတာတွင်ဝင်သည် 71031 Marvel စတူဒီယိုမရ။ သို့သော်အခြား ဦး နှောက်ရှာသော Avenger သည်သူ့အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်ထုတ်ဖော်ခဲ့သည် Lego ပါဝင်မည့်အဖွဲ့ စုဆောင်းထားသောအသေးစား စီးရီး။
Hawkeye သည်မသေနိုင်သောရောဂါဖြစ်ပွားမှု၌ကျရောက်ခဲ့သောကံမကောင်းသူရဲကောင်းများအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ သူ့ရဲ့ artအလုပ်ကကုတ်အင်္ကျီဖြူဖျော့ဖျော့နှင့်အရိုးအောက်တွင်ပြသောအ ၀ တ်နှင့်ဆင်တူဝတ်စုံကိုပြသသည်။
Zombie အဖြစ်အတည်ပြုသောဇာတ်ကောင်နှင့်အတူ Hawkeye သည် Steve Rogers နေရာတွင် Steve Rogers နေရာယူနိုင်ခဲ့သည် 71031 Marvel စတူဒီယိုဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့နှိုင်းယှဉ်စရာဆိုးရွားတဲ့ဒီဇိုင်းကအဲဒါကိုရပ်တန့်စေခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ် Lego သူ့ကိုအထိုင်အတွက်ရွေးမနေပါနဲ့။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမစီးရီး Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား ယခုရရှိနိုင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖတ်ရှုနိုင်သည် In-depth ပြန်လည်သုံးသပ် ဒီအပတ်ဇာတ်လမ်းတွဲမှာငါတို့မြင်ရမယ့်ဇာတ်ကောင်ဒီဇိုင်းတွေကိုကြည့်ဖို့ minifigures ၁၂ ခုစလုံးထဲက ဖုတ်ကောင် Hunter Spideyမရ။ နိဂုံးချုပ်အရာအတွက် Marvel ဖုတ်ကောင်များ၊ အဲဒီ့အတွက်ငါတို့မှာလမ်းညွှန်တစ်ခုရှိတယ်.
← ဒါကအနာဂတ် LEGO DC Aquaman minifigure ကိုပထမဆုံးကြည့်တာလား။
Classic LEGO minifigures များသည် A ပေါ်တွင်ရှိသည် city၂၀၂၂ အတွက်ဘတ်ဂျက် →